အဒ်လ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Adl (အာရပ်: عدل၊ ʻAdl) သည် အာရဗီ စကားလုံးဖြစ် အဓိပ္ပာယ်မှာ 'တရားမျှတမှု'ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ရှိဘုရားသခင်၏အမည်များမှတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အာဒိလ် နှင့် အဒီးလ် တို့သည် Adl မှဆင်းသက်လာသော အမျိုးသားအမည်များဖြစ်ပြီး မူဆလင်လောကနှင့် အာရပ် တခွင်တွင်ရေပန်းစားသော အမည်များ ဖြစ်သည်။
တရားရေးရာအုပ်ထိန်းသူများ၊ ဝန်မင်းများ၊မင်းသားများ၊ နယ်စားများ နှင့်ဘုရင်များအတွက် တရားရေးမူအရင်းအမြစ်များ (Usman dan Fodio)
အစ္စလာမ့်ဥပဒေပညာများတွင် အစောပိုင်းအယူအဆဖော်ထုတ်သူ များသည် Adl ကို တစ်ဦးချင်းစာရိတ္တဆိုင်ရာရှုဒေါင့်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းအသုံးပြုကြသည်။ ဤရှုဒေါင့်သည် တည်ကြည်စွာ အကောင်း ဆုံးဘာသာပြန်ထားသည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်၏ သာသနာ့သုတေသီအများစုသည် Adl ကို တရားမျှတမှုဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် အသုံးပြုနေကြသော်လည်း သာသနာ့ပညာရှင်များ မည်သို့အသုံးပြုကြသည်ကို သိနိုင်ရန် ပို၍တိကျစွာလေ့လာရန် လိုအပ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
Adl သည် အစ္စလာမ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားမျှတမှုအ တွက်အသုံးပြုသော စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ဤဝေါဟာရ၏ အယူအဆသည် ရှီအာနှင့် စွန္နီအကြား ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ပင်ကိုယ်စရိုက်အရ အကောင်းနှင့် အဆိုးကြားကွာ ခြားမှုကို ယုတ္တိဗေဒဆန်ဆန် သိနားလည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လွတ်လပ် သောဆန္ဒသည်လည်း အပြည့်အဝဖြစ်သည်ဟု ရှီအာများကယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်လျက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဤဗျာဒိတ်တော်၊ ကုရ်အာန်ကျမ်းတို့ကို အဆိုးအကောင်းခွဲခြားနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းအဖြစ် သေချာပေါက်လိုအပ်သည့်အပြင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် လက်ခံခြင်းတွင် လွတ်လပ်မှုရှိသည်ဟု စွန္နီများက ယုံကြည်ကြသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
တော်ဝင်မိသားစုအမည်ဖြစ်သည့် ဂုဏ်သရေရှိအသုံးအနှုန်းများမှ Adl ၏ မူလအရင်းအမြစ်အား ၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလရှိ အီရန်နိုင်ငံသား ရှေ့နေများကို မျိုးရိုးပတ်သက်မှုဖြင့် ဆက်စပ်၍ အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။အထူးသဖြင့် ထိုရှေ့နေများမှာ ဟားဂျ်မီရ်ဇာဟုစိုင်းန် (ဟုစိုင်းန်ရှားဟ်ဟုထင်ရှားသည်)ဂုဏ်ပုဒ်မှာ အဒ်လုလ်မုလ်က်(နိုင်ငံ၏တရားတော်)၊ ဆိုင်ယိဒ်မီရ်ဇာအိဘ်ရာဟီးမ်ခလီးလ် ဂုဏ်ပုဒ်မှာ ရုက်နုလ်အိဒါလဟ် (တရားရေးမဏ္ဏိုင်)နှင့် မီရ်ဇာမုစ်သွဖာခေါန်အာဒိလ် ဂုဏ်ပုဒ်မှာမန်ဆွူးရုလ်စလ်သွနဟ်(ဧကရာဇ်၏အောင်မြင်မှု) တို့ဖြစ်ကြသည်။ အီရန်နိုင်ငံ ခေတ်သစ်အရပ်ဘက်ဥအဒေရေးဆွဲသူ ဒုတိယမုစ်သွဖာအာဒိလ်သည် ပါလီမန်အတည်ပြုဖွဲ့စည်းချိန်ဖြစ်သည့် ၁၉၀၃- ၁၉၀၅ခု အီရန်နိုင်ငံ တော်လှန်ရေးပြီးချိန်တွင် ဟကီးကသုလ်မဒနီး(အရပ်ဘက်ရပိုင်ခွင့်)ကို မူကြမ်းရေးသားခဲ့ပြီး ယခုတိုင် လက်ရှိအစိုးရများ ကျင့် သုံးနေကြရသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
↑ အဘူလ်ဟစနုလ်မဝါရ်ဒီ, ဘာသာပြန် Wafaa H. Wahba. The Ordinances of Government. ဂါးနက်တ်ဖြန့်ချိရေးကုမ္ပဏီ, ၂၀၀၀ခုနှစ်.
Adl ၏ အသံထွက် Archived 19 February 2007 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဒ်လ်&oldid=627099" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။